Profesora Taiwaney Nosamborina Noho Ny Fanoherany Ny Fandravan-Trano An-katerena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2013 5:31 GMT
Profesora iray ao Taiwan no voasambotra [zh] niaraka tamin'ny mpianatra nanao fihetsiketsehana nandritra ny fihetsiketseha-panoherana fandravana trano maromaro ho fanitarana ny zaridaina [Siantifika] -n'i Jhunan ao amin'ny zanaparitr'i Miaoli, Taiwan.
Nihiaka ny tarigetran'ny fihetsiketsehana i Hsu Shih-Jung (徐世榮), profesora ao amin'ny Departemantan'ny Toekaren'ny Tany ao amin'ny Oniversite Nasionalin'i Chengchi, “Androany ianareo mandrava an'i Taipu, rahampitso izahay mandrava ny governemanta”, raha nisambotra [zh] azy ny polisin'i Taipei tamin'ny 23 Jolay 2013. Nafindra tao amin'ny komisariàn'ny polisy tao an-toerana izy ary nampangaina [zh] ho mampidi-doza ny vahoaka. Navotsotra i Hsu ny ampitso ary nesorina ny vesatra natao taminy noho ny tsy faneken'ny mpitsara ny fiampangan'ny polisy.
Iray amin'ireo nanatrika ny fifampiraharahana nifanaovan'ny mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanesorana amin'ny tompony ny tanimbary ao Jhunan sy ny Mpanatanterak'i Yuan nosoloin'ny Praiminisitr'i Taiwan Wu Den-yih tamin'izany fotoanan'ny Aogositra 2010 izany rehefa nanomo tena nandritra ny fihetsiketseha-panoherana ny vehivavy iray 72 taona i Hsu. Nandritra io fihaonana io, nisy fifanarahana vita fa hotandrovina ny trano efatra, manamorona ny zaridaina siantifika, izay fianakaviana samihafa no tompony.
Saingy noraisin'i Wu Den-yih, izay filoha lefitr'i Taiwan amin'izao ny andraikitra nanome baiko ireo fianakaviana efatra tamin'ny alalan'ny governoràn'ny tanànan'i Miaoli hiala mialoha ny datin'ny 5 jolay 2013 handravana ny trano.
Nandoko sary an-dridrindra lehibe eo amin'ny rindri-tranon'i Chang ny mpanao fihetsiketsehana. Saripikan'i Taiwan Rural Front.
Noho ny fahatezerana avy amin'ny fanitsakitsahan'ny governoràn'i Miaoli ny fifanarahana dia nivory manodidina ireo trano efatra ireo ho fiarovana azy amin'ny fanesorana amin'ny tompony ny tranony nihoatra ny roa herinandro ny mpanao fihetsiketsehana. Iray amin'ny fianakaviana efatra tsy manaiky hiala i Chang. Ny tranon-dry zareo moa dia miorina eo ami'ny fihaonan-dalan'ny Lalana Fahamarinana sy ny Lalana Fitiavana ka eo no lasa toerana saimbolika hanaovana fihetsiketsehana.
Tamin'ny 18 jolay, raha nizotra hanao fihetsiketsehana eo anoloan'ny Biraon'ny Filoha ao Taipei ny ankamaroan'ny mpanao fihetsiketsehana, dia nibaiko ny polisy hanaisotra ny ambin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay nivory teo anoloan'ireo trano ny komiseran'ny zana-paritr'i Miaoli, Liu Cheng-Hung, ary nanome baiko ny fiarabe mpandrava trano hamotika ireo trano ireo. Na dia efa potika aza ny trano dia tsy nanaiky ny hiala ny mpanao fihetsiketsehana ary manohy ny tolona.
Hatramin'ny fotoana nanatrehan'ny profesora Hsu Shih-Jung ny fihaonana nifampiraharahana tamin'ny 2010, dia nohazavainy fa tsy mifanaraka amin'ny Lalampanorenan'i Taiwan ny fanesorana amin'ny tompony ny taniny mitranga ao Jhunan [zh]. Tao amin'ny bolongany no nanavazavany izany tamin'ny 16 jolay mialoha ny nandehanany tao amin'ny fihetsiketseha-panoherana tao Taipei tamin'ny 18 jolay:
Miankina amin'ny taniny ny olona amin'ny fananganana ny fianakaviany sy ny tranony, ary tsy azo itsakitsahana izany zo izany. Azo dikaina ireo zo ireo raha mifanaraka amin'ny Fanitsiana ny Lalampanorenana laharana faha-23 : “Fanatsarana ny tombontsoan'ny besinimaro”. Inona ny tombontsoan'ny besinimaro? Ny Mpitsara Lehibe, Wu Keng-Chien, nanasongadina […] “ny marimaritra iraisna amin'ny alalan'ny adihevitra atrehim-bahoaka any amin'ny fikambanana isan-karazany” no tombontsoan'ny besinimaro. Saingy, ny rafi-pandaminana ny tanandehibe kosa tsy nandray izany petra-kevitra na fomba fiasa izany. Izany no mahatonga ny zo fototra mahaolona antsika ho voahitsakitsaka fatratra.
Ao Taiwan, ny famaritana ny tombontsoam-bahoaka eo amin'ny sehatry ny fandaminana ny tanàndehibe (plan d'urbanisation) dia fehezin'ny vondron'olombitsy vato nasondrotry ny tany ara-politika ao amin'ny komitin'ny fandrafetana ny rafi-pandaminana ny tanandehibe, komitin'ny rafi-pandaminana tanandehibe isam-paritra ary ny komitin'ny fakana ny tany. Farasisan'ny vanim-potoanan'ny jadona.
Ao amin'ireny komity ireny, ny atsasaky ny mpikambana dia avy amin'ny fitantanam-panjakana sy fikambanana mifandray amin'ny governorà. […] Raha ny marina, ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny komity dia avy amin'ny governorà. In fact, most of the committee members are from the government. Tsy ialan-dromoromo amin'ny fifandrorita-tombontsoa ny eo amin'ny fitarihana. Ankoatra izany, matetika ny eo amin'ny fitarihana no manery ny handaniana ny tetikasa. Vokatr'izany, ny lazaina ho ‘tombontsoam-bahoaka’ dia fehezin'andian'olona vitsivitsy.
Hetsika Sit-in taorian'ny fandravana ny trano. Saripika noraisin'ny Taiwan Rural Front.
Raha ny marina, navoitran’ilay mpanangom-baovao mahaleo tena AboutFish avy amin'ny sehatra fitantaran'olo-tsotra vaovao Fiainana Tsara Taiwan fa nampitombo ny trosan'ny governorà ao an-toerana ny fanapaha-kevitra hanitarana ny Zaridaina Siantifika. Tsy mahazo tombontsoa avy amin'ny tetikasa ny fokonolona Miaoli, ny loza aza dia mizaka trosa 73.000 dolara Taiwan vaovao (eo ho eo amin'ny 2.320 dolara amerikana) tsirairay avy amin'ny trosan'ny governorà ny mponina. Mahatratra 41 miliara dolara taiwan vaovao (1,29 miliara dolara amerikana) ny trosan'ny governorà ao Miaoli has reached 41 billion new Taiwan dollars (1.29 billion US dollars) ary mety mbola hisy ny trosa 10,3 miliara dolara Taiwan vaovao koa hivoaka (33,5 tapitrisa dolara amerikana).
Tamin'ny famerenanteny avy amin'ny tenin'i Aboutfish no nanazavan'ny [zh] profesora Hsu ny tombontsoa azo avy amin'ny fangalana ny tanin'olona ataon'ny governora isam-paritra:
Ahoana moa ny fomba hahazoan'ny governemanta vola rehefa miatrika tsy fahampiam-bola ry zareo? Tsy mahasahy maka vola amin'ny mpanankarena sy ny mahery ny governemanta. Ny ataony aza dia ny manakely sy ny manaisotra ny hetra tokony aloan'izy ireo. Etsy ankilany indray, manembatsembana ny fiainan'ireo antokon'olona niangarana ny governemanta ary manala azy ireo amin'ny taniny tsy misy fanekena avy aminy. Amin'ny alalan'ny fitsinjarazarana ny tany dia mahazo hatramin'ny apahatelon'ny tany tadiaviny ny fitondrana ao an-toerana. Mahazo mivarotra ny tany nalaina izy ireo hamenoana ny banga amin'ny tetibola. Ankoatra izay, misy ny vondron'olona zatra mahazo vola amin'ny alalan'ny fanangana-trano. Amin'ny alalan'ny fanesorana tsikelikely amin'ny tompony ny taniny no ananganan'ny governora ao amin'ny faritra fifandraisana matanjaka amin'ireo vondron'olona mahazo tombontsoa ireo sy hahazoany antoka fa hahazo fanohanana ara-politika kosa ho setriny.
Mbola mitohy ny ataon'ny mpanao fihetsiketsehana, mitaky ny hamerenan'ny governemanta ny tany nalaina, hamotopototra ireny fanafintohinana ireny ary hijery indray mandeha ny lalàna mikasika izany.
Nihiaka ny Profesora Hsu hoe: Androany ianareo mandrava an'i Taipu, Rahampitso izahay mandrava ny governemanta, rehefa nifaoka azy ny polisy. Saripika noraisin'ny 陳韋綸 avy amin'ny coolloud.org. Tsy ampiasaina amin'ny resaka varotra.